Karantiilka Koranaha iyo diinta Islaamka waxa ay ka tiri | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Faalooyinka Karantiilka Koranaha iyo diinta Islaamka waxa ay ka tiri
“Nabigeena Maxamed (SCW) wuu ka hadlay arrinta karantiilka 14-ka maalin ah, boqollaal sano ka hor,”ayuu yiri Cafer Karadas, oo Arrimaha diinta ka dhiga Jaamacadda Uludag, ee dalka Turkiga wuxuuna tixraacayay mid ka mid ah Axaadiista aadka loo garanayo.
Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah culimada Soomaalida isagoo ka hadlayay maalmihii uu bilowga ahaa fayraska Korona, ayaa soo qaatay xadiiskaas, “Markaad maqasho [daacuunka] dhul uu ku dhacay [oo aad joogto] haka bixin, haddii aad maqasho dhul uu ka jirana ha u tagin,”ayuu yiri Nabiga CSW.
“Culimada qaar waxay isku khilaafaan daacuunka. Qaar waxay leeyihiin xanuun kasta oo fida daacuun baa la dhahaa. Sidaa daraateed, qaarkood waxay siiyaan in cuduradan markasta dillaacaya ee fayraska ah ee abtirka kala gedisan leh ee aadanaha baabi’inaya waxay siiyeen axkaamtii daacuunka,” ayuu yiri Sheekha.
Sida uu xusay Karadas,”Arrintan waxay la xiriirtaa qaabka karantiilka casriga ah. Waxa hadda loo adeegsanayo [ee quseeya corona fayras] wuxuu la mid yahay taladii uu bixiyay Nabi Maxamed.”
Sheekh Umal ayaa dhankiisa yiri: “U fiirsada sida uu Nabiga (SCW) ula tacaamulay daacuunka. Cudurada noocan ah siduu ula tacaamulay waa sida hadda uu adduunka uga hortagayo”.
“Waxaa waaye in meesha uu ka dillaacay inta ku jirtana aysan soo bixin, inta ka maqanna aysan soo gelin. Nabiga SCW baa sidaa u daaweeyay,” ayuu hadalka ku sii daray.
Iyadoo weli ay taagan tahay dhibaatada fayraska Covid-19 ayna u dhimanayaan boqollaal kun oo qof, “taladii nabiga ee looga falcelinayay cudurada safmarka ah waxay jirtaa hadda taas oo ah in dadka guryaha lagu xareeyo si fayraska loo dhimanayo looga ilaaliyo.
“Qarniyo badan ka hor, Nabigeena wuxuu dadka ku baraarujiyay in la joojiyo is taabashada dadka si nolol loo badbaadiyo. Waxay muujineysaa sida Islaamka uu muhiimad u siiyay nolosha iyo caafimaadka,” ayuu yiri Karadas.
Sheekh Maxamed Cabdi Umal wuxuu yiri: “Masaa’ibta iyo cudurada waxay ku imaanayaan sababta dembiyada ay aadanaha galayaan,” isagoo soo daliishaday aayado iyo axaadiis badan.
“Nabiga wuxuu ahmiyadda koobaad geliyay caafimaadkiisa iyo caafimaadka bulshada. Markii uu Madina joogay, ee uu heshiiska la gali rabay koox, wuxuu diiday inuu gacanta ku salaamo mid ka mid ah wafdigii kaas oo cudur halis ah qabay, wuxuuna ku amray inuu ku noqdo meeshii uu ka yimid,” sida uu sheegay Huseyin Ari, oo ah khabiir sare oo ka tirsan Guddiga maamulka ee Arrimaha Diinta Turkiga.
“Khaliif Cumar, wuxuu ciidamada u sheegay in ay dib u gurtaan iyagoo eegaya xanuunkaas faafayay,” Ari ayaa sidan u sheegay TRT World.
Ka dib, wuxuu Cumar aaday meel uu kula shiro asxaabtii kale ee hoggaanka ciidanka haysay. Markii la isku afgaran waayay, wuxuu la tashaday taliyeyaal kala duwan si uu go’aanka ugu dambeeya uu u gaaro.
Markii ugu dambeysay, wuxuu go’aansaday in uu dib uga noqdo dhulkaas uu daacuunka ka jiray.
“Aniga dib ayaa u noqonayaa subixii, adinkana soo noqda,” ayuu yiri Cumar oo ku dhawaaqayay go’aankiisa dib u noqoshada, sidaas waxaa qortay Warbaahinta Turkiga ee TRT.
Abu Cubaydah ibnu Jarrax, oo taliyaha ciidanka ahaa, Cumar na saaxiib la ahaa, ayaa diidan go’aankaas, wuxuuna weydiiyay: “Ma waxaad ka carareysaa qararta alle?” sida uu sheegay Sheekh Maxamed Cabdi Umal.
“Haa, waxaa ka carareynaa qadarta alle waxaana u carareynaa qadarta Alle,” ayuu ku jawaabay Cumar.
Sida uu Sheekh Umal sheegay: “Cabdiraxman Ibnu Cowf oo ka mid ahaa asxaabta ayaa u yimid Cumar una sheegay xadiiska ah ‘haddaad dhul daacuun ka jiro aad joogtaa ha ka bixina, haddii aad ka maqan tihiinna ha gelina'”.
Sida ku xusan taariikhda, “cudurkaas safmarka ahaa waxaa u dhimatay ku dhowaad 25,000 ka mid ahaa Muslimiinta,” ayuu yiri Ari
Karadas oo ah khabiir arrimaha diinta, wuxuu sheegay in sida Islamka “uu nolosha u ilaaliyay” ay tahay mid si gaar ah ula xiriitay ilaalinta shaqsiga iyo caafimaadka bulshada.
“Cudur safmar ah waxaa cad inuu halis ku yahay nolosha shaqsiga iyo midda bulshada. Taas waxaa natiijo u nqon kara in qof kasta oo Muslim ah uu si adag ugu hoggaansamo talooyiinka khubarada cudurada faafa si naftaada shaqsiga ah iyo midda bulshada loo ilaaliyo,” ayuu yiri Karadas.
“Haddii aan dhibaateyno caafimaadka qof kale ama dhaqaalihiisa, si toos ah ama si aan toos ahayn, waxaa dhib u geysanayn xuquuqdiisa shaqsiyadeed,” ayuu yiri Ari.
“Haddii qof uu fayrska u gudbiyo qof kale, taas oo ka dhalata diidmadeena iyo ficilladeeda ula kaca ah, waxaad ku xadgudubtay xaqiisii shaqsiga ahaa,” ayuu Ari carabka ku adkeeyay.
“Haddii qof uu u dhinto sababo la xiriira fayras – Alle ha inaga badbaadiyee – wuxuu taas micneheedu yahay qofkii u gudbiyay kaalin buu ku leeyahay dhimashadaas, [wuxuu masuul ka noqonayaa sababta geeridaas],” ayuu yiri sarkaalkan ka tirsan guddiga sare ee arrimaha diinta ee Turkiga.
Previous articleItoobiya oo rabta in Somalia ay siyaasad kula wareegto
Next articleCudurka Coronavirus oo mar kale ku soo laba kacleeyay dalka Shiinaha